Snn Nepal पाकिस्तानी दूतावासद्वारा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हस्तान्तरण – Snn Nepal
A Pakistani embassy employee stand at the Pakistani embassy in Kabul on February 12, 2008. Pakistani authorities searched for the country's missing ambassador to Afghanistan Tariq Azizuddin on February 12 after he was feared abducted inatroubled tribal area where Taliban militants are active.The diplomat's disappearance on February 11 highlighted the spiralling insecurity ahead of crucial elections next week in the nuclear-armed nation,akey ally in US efforts against Islamic extremism. AFP PHOTO/SHAH Marai (Photo credit should read SHAH MARAI/AFP/Getty Images)
नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरेको छ । दूतावासले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि पाँचसय पचास जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाली सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको जेहेन्दार विद्यार्थीहरूप्रति विद्यार्थी १० हजारको दरले छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विद्यार्थीको पढाइमा सघाउ पुगोस् भनेर दूतावासले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । कार्यक्रममा राजदूत सैयद हैदर शाहले छात्रवृत्ति सहयोग जस्तो कार्यक्रमले नेपाल र पाकिस्तानी सरकारको सम्बन्ध जनताको तहमा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए ।